Hawlgalinta iCloud miyaa waxyeellay macruufka 11.1? Waxay umuuqataa sidaas | Wararka IPhone
Hawlgalinta iCloud miyaa waxyeellay macruufka 11.1? Waxay umuuqataa inay tahay
Ka shaqeynta iCloud waa mid ka mid ah tallaabooyinka amniga ee ugu wanaagsan ee aan maanta ku dooran karno aaladaha iOS-ka guud ahaan, oo ay ku jiraan iPad iyo iPhone. Thanks to nidaamkan, mar kasta oo aan dib u bilowno ama dib u soo celino iPhone-ka, nidaamku wuxuu u diraa codsi waxqabad nidaamka iCloud ee internetka oo wuxuu na weydiinayaa koontada Apple ee qalabku ku xidhan yahay.
Tani waxay ka dhigan tahay in si kasta oo aan isugu mashquulsano sameynta mala-awaalka, markaan haysanno qalab iOS ah oo aan annaga iska leenahay, ma heli karno gabi ahaanba taleefanka, waxaan haysannaa warqad miisaanka wanaagsan oo loogu talagalay Cupertino Si kastaba ha noqotee, waqti ka waqti cayayaanka ayaa u muuqda sida kan aan maanta dooneyno inaan ku tusno oo khatar gelin kara amniga tiro qalab wanaagsan leh.
Ku shaqeysiinta shaqeynta Raadi iPhone-kayga Mar dambe uma baahnid inaan ka walwalsano arrinta waxqabadka, maadaama hadda laga bilaabo ay si otomaatig ah u shaqeyn doonto. Si kastaba ha noqotee Wax kasta oo Macquul ah wuxuu ina tusayaa xeelad yar oo noo ogolaaneysa inaan ka gudubno firfircoonaanta iCloud isla markaana aan marin u helno iPhone-ka oo leh kuwo cusub oo iOS 11 iyo iOS 11.1 ah oo lagu rakibay wax cusub, tanina waa war aad u xun. Waxay umuuqataa inay tahay inaan sugno iOS 11.2 si aan u aragno dhibaatadan la xaliyay, waxaan qiyaasayaa in Cupertino aysan waqti dheer qaadan doonin.
Waxay noo ogolaaneysaa inaan si toos ah uga tagno shaashadda hawlgalka doorashada lambarkaMarkaan galno koodh khaldan, waxaan sugeynaa ugu yaraan lixdan daqiiqo oo markale ayaan isku dayaynaa, koodh khaldan. Anaga oo aan u muuqan dareen, waxay noo oggolaan doontaa inaan u sii wadno qaybta xigta waxaanan ku sii wadaynaa iPhone-ka sidii oo aannu annagu u nahay, nabad gelyo hawsha iCloud. Uma muuqato wax fiican dhammaantiis, maxaa yeelay tani waxay joojineysaa shaqeynta waana khaladka ugu weyn ee ugu weyn ee iOS 11, waxaan tijaabada ku sameyn doonaa iOS 11.2 si aan u aragno natiijada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Hawlgalinta iCloud miyaa waxyeellay macruufka 11.1? Waxay umuuqataa inay tahay
Sida loo arko boqolkiiba batteriga ku yaal iPhone X
Apple wuxuu hagaajiyay cilladaha kumbuyuutarka ee iOS 11.2 beta 2